गुणस्तर बढाउन अंग्रेजी माध्यम::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ, ३ साउन – बिद्यार्थी संख्या घट्दै गएपछि बागलुङको रिघा स्थित किम्ले प्राथमिक बिद्यालयमा गुणस्तर बिकासको काम थालिएको छ । बिद्यालयले बालबालिका लाई अंग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेको छ । साथै बिद्यालयले अतिरिक्त शिक्षक समेत नियुक्त गरेको छ । छोराछोरीको पढाईको लागि अभिभावक समेत बसाई सर्ने समस्या भएपछि गुणस्तर बिकासको काम थालेको बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डाकबहादुर श्रीसले बताए । हरेक बर्ष बालबालिका घट्न थालेपछि न्युन संख्या भएका बिद्यालयलाई मर्ज र खारेजी गर्ने अभियान चलेको छ । गलकोट नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले पनि सबै बिद्यालयमा पत्राचार गरेर बिद्यार्थी संख्या बढाउन सझाव दिएको थियो । आगामी बर्ष सम्म बिद्यार्थी संख्या नबढेमा खारेजीमा पर्ने चेतावनी दिएपछि गुणस्तरीय शिक्षा बिकासको काम थालेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिराबहादुर श्रीसले बताए । हाल कक्षा एकदेखि पाँचसम्म नै अंग्रेजी माध्पढाउन लागिएको समेत उनले जानकारी दिए ।
हाल यो बिद्यालयमा २४ बालबालिका अध्ययन गर्छन् । आगामी बर्ष भित्र बिद्यार्थी संख्या दोब्बर पु¥याउने लक्ष बनाएको श्रीसले बताए । केही समय अघि गलकोटकै वडा नं. ७ को प्रगती प्राविलाई पनि खारेजीको तयारी गरिएको थियो । बिद्यालयले बिद्यार्थी संख्या बढाउने प्रतिवद्धता पछि रोकिएको उक्त बिद्यालयमा अहिले १ सय बढी बालबालिका पढ्छन् ।